सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको स्कुलको मार्क लेजर प्रधानमन्त्री पढेकै स्कुलको हो त ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको स्कुलको मार्क लेजर प्रधानमन्त्री पढेकै स्कुलको हो त ?
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एक तस्विर भाइरल भैरहेको छ । सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‍ओलीले पढेको स्कुल भन्दै भाइरल गराइएको उक्त तस्विर भनेको २ कक्षामा पढ्ने ११ जना विद्यार्थीले बार्षिक परीक्षामा ल्याएको शैक्षिक उपलव्धी हो । जसमा प्रतिशतलाई हिसाव गर्न गल्ति गरिएको छ । ५ सय पूर्णाङ्कको परिक्षामा ४ सय ९५ ल्याउने लक्ष्मी चौधरीको प्रतिशत ५७३.२४ छ । जुन गलत हो । त्यस्तै अन्य १० जना विदयार्थीको पनि प्रतिशतको हिसाव गलत तरिकाले निकालिएको छ ।
कक्षा शिक्षकले गल्ति गरेपनि प्रधानाध्यापकले उक्त गल्ति सच्चाउन सक्थे तर उनले पनि आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानाध्यापकले समेत हस्ताक्षर गरेको देख्न सकिन्छ ।
कपीमा तालिका बनाएर राखिएको उक्त लव्धांक पत्रमा रहेको स्कुलको छापले गर्दा यो झापाको विद्यालय हो भन्न सक्ने आधार छ । तर छाप स्पष्ट नभएको कारणले गर्दा झापा जिल्लाको कुन विद्यालयको हो भनेर छुट्याउन सकिने अवस्था छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा भनेजस्तै यो सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‍ओलीले पढेको स्कुल भने कि होइन पुष्टि गर्ने कुनै आधार देखिएको छैन । केपी शर्मा ‍‍ओलीको जन्म वि सं २००८ साल फागुन ११ गते शनिबार तेह्रथुम जिल्लाको इवा गाउँमा भएको थियो । उनले प्राथमिक शिक्षा त्यही नै अध्ययन गरेका थिए भने उनको परिवार विंस २०२० सालमा झापामा बसाइ सरेको थियो । झापा आउँदा १२ वर्षका भएका प्रधान्मन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको स्कुलमा पढेका हुन भनेर ठोकुवा गर्ने कुनै आधार देखिएको छैन ।
खोज पत्रकारितामा रुची राख्ने झापाका पत्रकार नरेन्द्र ढकाल भने यो झापाको नहुने सक्ने बताउँछन् । केटीएम दैनिकसँग कुराकानी गर्दै ढकाल भन्छन् “पहाडको कुनै जिल्ला भए एउटा कक्षामा ११ जना मात्र विद्यार्थी रहेछन् भन्दा पत्याउन सकिन्थ्यो । तर धेरै जनसंख्या भएको झापा जिल्लाको कुनै विद्यालयमा २ कक्षामा ११ जना मात्रै विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ ।”
सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउन कसैले उटपटयाङ्ग गरेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, वैशाख २९ २०७७ १७:२५:२६